के हुन्छ दम्पतीले अरुस‌ँग सम्बन्ध राख्दा - Muldhar Post
के हुन्छ दम्पतीले अरुस‌ँग सम्बन्ध राख्दा
पत्रपत्रिका खबर २०७६, २१ आश्विन मंगलवार 654 पटक हेरिएको
मेरा एकजना पुरुष साथी छन् । हामी मिल्ने साथी भएका कारण उनले कतिपय अन्तरंग कुराकानी पनि गर्छन् । उनका केही कुरा मलाई अनौठो लाग्छ । मेरा ती साथी बिवाहित हुन् । उनी श्रीमतीलाई निकै माया गर्छन् । यद्यपि कहिलेकाहीँ उनको सम्बन्ध वाहिरी युवतीहरुसँग हुने गरेको छ । उनी यस्ता सम्बन्धलाई नाजायज मान्दैनन् ।
बहु यौन सम्बन्धले समस्या निम्त्याउँछ-कसैसँग दाम्पत्य जीवन बिताउने क्रममा बाह्य सम्वन्ध पनि कायम गरेर मिलाउने प्रयास गर्नु जुवा खेले समान हो । यस्तो व्यवहारले अन्तत्वोगत्वा जीवनलाई अप्ठ्यारो मोडमा पुर्‍याउँछ । धेरैले दाम्पत्य जीवनभित्रको यौन सम्वन्धलाई भावनात्मक रुपमा पनि रोचक बनाउने गरेका छन् । अर्कोतिर, ओछ्यानमा तनाव अर्थात ‘ट्रबल इन द बेड’ भयो भने झगडा बढ्दै गएर सम्वन्ध बिग्रने र अर्को स्थायी वा अस्थायी सम्वन्ध विकास गर्नेतिर लाग्नेहरु पनि भेटिन्छन् । यस्तो सम्बन्धले सुरुमा सन्तुष्टि दिएपनि विस्तारै समस्या आउँछ । त्यसपछि पुरानै सम्बन्धमा फर्किनेहरु पनि छन् ।
मानिसमा केही न केही मनोवैज्ञानिक कमजोरी हुन्छ । त्यही कमजोरीका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो बेला मानिसहरु आफ्नो समस्या पहिचान गर्नतिर नलागि नयाँ सम्बन्ध जोड्न पुग्छन् । नयाँ सम्बन्धमा पनि फेरि पुरानै समस्या दोहोरिन थाल्छ । अहिलेसम्मका अध्ययनले यही देखाएको छ । एकै समयमा दुई जनासँग यौन सम्बन्ध भईरहने हो भने आफ्नो पार्टनरमा मात्र नभई ढिलो चाँडो आफूमा पनि भावनात्मक र सामाजिक जटिलताहरु आउँछन् । किनभने, बहुयौन सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिको मनमा डर, चिन्ता र ग्लानी भई राख्छ र दैनिक कृयाकलापमै पनि असर गर्न थाल्छ ।
जहाँसम्म वाहिरी यौन सम्बन्ध हुने सम्भावना वा त्यस्तो सोचाइको कुरा छ, त्यो दम्पत्तिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । तपाईको प्रश्नमा शारीरिक सम्बन्धको कुरा मात्र उल्लेख छ, तर अनुसन्धानहरुले राम्रो दाम्पत्य जीवनमा यौन र भावना दुवैले कति प्रभाव पर्छ भन्नेमा बढी चासो दिएको पाइन्छ । सन् २०१० मा प्रकासित ‘पर्सनालिटी एण्ड ईन्डीभिजुअल डिफरेन्सेस्’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, यौन र भावना दुवै पक्षका लागि वाहिरी सम्बन्ध हुने गर्छ ।
श्रीमान–श्रीमती बीच माया हुँदाहुँदै वाहिर फेर यौन सम्बन्ध हुने वा आर्कषित हुने सम्भावना कति हुन्छ ? घरमा श्रीमतीसँग गहिरो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि बाहिर यौनसम्बन्ध हुन्छ वा आकर्षित हुने सम्भावना हुन्छ भने मनोविज्ञानका हिसावले यसको कारण के हो ? यो मामिलामा मेरा पुरुष मित्रले आफ्नी श्रीमतीलाई धोखा दिएको भन्न किन मिल्दैन ?
उक्त सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८५.५ प्रतिशत उत्तरदाताले यौन संसर्गका लागि मात्र वाहिरी सम्वन्ध नहुने बताएका थिए । यो अनुसन्धानले के पनि उजागर गरेको थियो भने, बाहिरी सम्वन्धलाई प्रोत्साहन गर्नेमा महिला भन्दा पुरुष बढी हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा भने महिलाहरु पनि बाहिरी सम्बन्धमा इच्छुक हुन थालेको देखिन्छ । तर, यो समुहमा बिबाहित भन्दा यौन सम्बन्ध जोडेर बसेका अविवाहित महिला धेरै छन् ।
समाजमा यौन स्वास्थका लागि यौन मनोविज्ञानको कुरा गर्नु आवश्यकता हुन्छ । यौन प्राणीको अनिवार्य आवश्यकता भएको कुरालाई कसैले नकार्दैन । तर, बहुयौन सम्बन्धले तत्काललाई सन्तुष्टि दिएको भान भएपनि अन्ततः समस्याहरु नै निम्त्याउँछ । त्यसैले आफ्नो स्थायी पार्टनरसँगै बढि भन्दा बढि खुसी हुने वातावरण सिर्जना गर्नु उत्तम हुन्छ ।
कसैप्रतिको आकर्षित हुनु र प्रेम हुनु फरक कुरा हुन् । म कुनै व्यक्तिलाई प्रेम गर्छु भन्नेलाई उसँग यौन सम्बन्ध राख्ने कि जीवनभर सँगै बस्ने चाहना हो भनेर सोध्दा सत्य उत्तर आउँछ । यौन सम्वन्ध र प्रेम सम्वन्ध राख्दा अपनाइने विधिहरु हरेक जोडीमा फरक हुन सक्छ । हरेक व्यक्तिको यौनेच्छा पनि फरक हुन्छ ।
स्वस्थ यौन सम्वन्धमा दुवैले आनन्दानुभूति गरेको हुनुपर्छ । कुनै एकजनाले जबरजस्ती यौन क्रियाकलाप गरेको महसुस गर्नुहुँदैन । दुईमध्ये एकजनाले आफूलाई ईच्छा नभएको बताउँदा त्यो भावनाको सम्मान हुनुपर्छ । यौन सम्पर्कपछि पनि एक अर्काप्रति सम्मान हुनुपर्छ । यस्ता पक्षहरुमा कुनै द्विविधा छ भने मनोविद् या मनोचिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
फ्लु ३६ घण्टामै फैलिएर
के कारणले पर्छन टाउकोमा
के हो अवि’वाहित युव’ती’मा
थरिथरीका याैनीका आकार
यी ६ खानेकुराले घटाउन्छ